Wix | Zeevou Integrations
Wix & Zeevou fampidirana
Mba hanampiana ny mpanjifany hiditra ao amin'ny The Direct Booking Revolution, Zeevou dia manome maimaim-poana sy feno tranokala famandrihana mivantana. Nihevitra ihany koa ny maotera famandrihana izay azo ampidirina ao amin'ny ankamaroan'ny tranonkala, ao anatin'izany ireo izay nataon'i Wix. Ny fampidirana Zeevou sy Wix dia ahafahanao mampiditra widget fikarohana ao amin'ny pejy fandraisam-bahinin'ny Wix. Amin'ity fomba ity, ny vahiny dia afaka mandray soa avy amin'ny taha-potoana misy anao sy ny fisianao amin'ny pejin'ny valin'ny karoka Maotera famandrihan'i Zeevou, mamandraha boky mivantana eo noho eo, ary miaraka amin'izay dia miasa miaraka amina interface tsara sy matihanina ampiasain'ny Wix.
Ampidiro Widget fikarohana ao amin'ny Homepage Wix anao
misoratra anarana amin'ny Wix